သငျသညျ Porn အပေါ်ချိတ်လား? ASAM ကိုမေးကြည့်ပါ
ပြီးခဲ့သည့်လကစွဲဆေးပညာများအတွက်အမေရိကန် Society ၏ 3000 ဆရာဝန်များကအဆိုပါဆောင်ခဲ့အများပြည်သူကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ စွဲလမ်း၏အဓိပ်ပါယျ စွဲသုတေသန၏ဆယ်စုနှစ်များစွာနှင့်အညီသို့။ "[စွဲ] ဦး နှောက်အကြောင်းပါ။ အဲဒါဟာအပြင်ဘက်လုပ်ဆောင်မှုတွေမဟုတ်ဘဲနောက်ခံအာရုံကြောဆိုင်ရာအကြောင်းပါ” ဟု ASAM မှရှင်းပြသည် ဒေါက်တာမိုက်ကယ် Miller က.
ASAM ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် NIDA ၏ခေါင်းဆောင် Nora Volkow, MD နှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်ဖော်ပြထားသောစွဲလမ်းမှု၏အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ စွဲ - လျော့နည်းသောဆုလာဘ်အာရုံခံမှုနှင့်မျှော်လင့်ထားမှုပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း ဦး နှောက်၏ထိန်းချုပ်မှုပတ်လမ်းကိုလွှမ်းမိုးရန်ရည်ရွယ်သည်။ စွဲအပြုအမူတွေကိုတိုင်းတာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို-နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပါဝငျ၏အကျိုးဆက်များမှာ နောက်ပြန်ဆုတ် ဤပြောင်းလဲ။ အဆိုပါ တွေ့ခဲ့ရဘူးအပြောင်းအလဲများ ဦးနှောက်၏အကျိုးကို circuitry န်းကျင်စင်တာ: တစ်ထုံပျော်မွေ့တုံ့ပြန်မှု, စွဲ-related တွေကိုမှအစွန်းရောက် sensitivity ကိုနှင့်တိုကျရိုကျ-cortex function ကိုအတွက်လျော့နည်းသွား။
ASAM ကိုလည်းတိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်:
သငျသညျ porn ရှုမြင်လျှင်, သင်ထားတဲ့စှဲလမျးသူသို့မဟုတ်မျှသာအသုံးပြုသူတစ်ဦးရှိပါသလဲ
ဤမေးခွန်းကိုအများဆုံးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်မိုက်တဦးတည်းဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ အင်တာနက်မတိုင်မီ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (ရှိပါက) စစ်မှန်လိင်စိတ်အချို့စပ်လျဉ်းဘွားမြင်လေ၏။ တဦးတည်းအတွက်လုံလောက်သောခဲ့သောအခါ, မဂ္ဂဇင်းမွေ့ရာအောက်မှာပြန်သွားလေ၏။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, သို့သော်, မှပါဝါရှိပါတယ် သဘာဝအမွတ်မပြေနိုင်သောယန္တရားများ override များစွာသောဦးနှောက်ထဲမှာ။ ဤအစွဲ-related ဦးနှောက်၏အန္တရာယ် ASAM ဖြေရှင်းပြောင်းလဲတိုးပွားစေပါသည်။
porn ကိုလေးစားမှုနှင့်အတူကြောင့်ပါပဲ မဟုတ်အချိန်ကုန် ကြည့်ရှုသို့မဟုတ် ဘာ မင်းကြည့်ရတာမင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲသွားပြီလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။ အဲဒီအစားဒီနိမိတ်လက္ခဏာကိုစောင့်ကြည့်:
တ ဦး တည်းရဲ့ပြproblemsနာများကို၏လျော့နည်းဆုပ်ကိုင်; နှင့်
ပြဿနာစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု။ (အသေးစိတ် ASAM စာရင်း)
ဒီအရိပ်အမြွက်ပြောသောလက္ခဏာများသည်ယနေ့ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများတွင်မည်သို့ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မည်နည်း။ ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သောညစ်ညမ်းစွဲသူများ၏အမှန်တကယ်အစီရင်ခံစာများမှအောက်ပါမေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူထားသည်။ သုံးစွဲသူများစွာသည်အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်သည်အထိသူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်သွယ်မှုကိုမပြုလုပ်ကြပါ။ သို့သော်ဤမေးခွန်းများနှင့်အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်သင်မလိုလားအပ်သောပြောင်းလဲမှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်အကူအညီရှာရန်လိုမလိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ထိန်းညှိရန်။
သင်ရှိသည် ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစား porn ကို အသုံးပြု. နှင့်ပျက်ကွက်? သငျသညျအသိပေးစာကိုပြု၏ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ?
သငျသညျရက်ပေါင်းများစွာ porn မှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတဲ့အခါသင်ပြင်းထန်သောမတရားသောတွေ့ကြုံခံစားသလား?
သင်သည်သင်၏လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့မကိုက်ညီကြောင်း porn အသုံးပြုနေသလား
porn သင်၏အသက်တာအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာကြည့်ရှုသလဲ? ဘဝမဟုတ်ရင်မှိုင်းပုံရသည်ပါသလား?
: သင်ကဲ့သို့သောသင် porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပေါင်းသင်းတစ်ခုခုတွေ့မြင်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုလျှင် porn အသုံးပြုခြင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်တန့်ဖို့အာဏာမဲ့ခံစားရပါ
သင်အကြိုက်ဆုံး fetish အတူတီဗီရှိုးကိုမြင်လျှင်, မှာအရိပ်အမြွက်ပြောကြားသို့မဟုတ်ပုံဖော်
တစ်အကြိုက်ဆုံး porn ကြယ်ပွင့်တွေအကြောင်းသတင်းကိုမြင်လျှင်?
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသုံးပြီးကတည်းကသင်သည်အခြားလူများအထူးသဖြင့်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်န်းကျင်ကိုပိုပြီးလျှာကို-ချည်ထား, မလုံခြုံ, အဆင်မပြေသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ခံစားရသလဲ
တခြားသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကခက်လား? သငျသညျအထီးကျန်ခံစားရပါသလား? သငျသညျအခြားသောသူတို့သည်သင်တို့ကိုစဉ်းစားသောအရာကိုအကြောင်းပိုမိုစိုးရိမ်ရှိပါသလား
သငျသညျ (သို့မဟုတ်သင်ဂရုစိုက်သောသူတို့အား) သင်သတိပြုမိကြပြီ
မသုံးမီထက်ပိုအချိန်ဆွဲခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုနည်းခြင်း (ဂရုမစိုက်ပါ)၊ နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်မိရန်အခက်အခဲရှိပါသလား။
ပိုစိုးရိမ်နာမငြိမ်, ထကြွလွယ်သောဖြစ်လာကြပါပြီ, စိတ်တိုမပျော်, အဆိုးမြင်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုထုံ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဓာတ်အလေးပေး?
သငျသညျလိင်စဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတွက်ကျဆင်းမှုသတိပြုမိကြပြီပိုပြီးလျင်မြန်စွာသုတ်ရည်လွှတ် (PE), Self-stimulation, porn သို့မဟုတ် porn စိတ်ကူးယဉ် (သင်ရော့ခ်-ခက်ခဲ porn မှရနိုင်ပင်လျှင်) မပါဘဲတစ်ဦးစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (သို့မဟုတ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း ,) လျော့နည်းကျေနပ်စရာအော်ဂဇင် orgasm ရန်, နှိုးဆွရလိင်စဉ်အတွင်းအပေါ်အလင်းအိမ်လိုအပ်တယ်, ဆွဲဆောင်မှုဖက်အားဖြင့်လိင်အဘို့အဘယ်သူမျှမဆန္ဒအပေါ်လှည့်မဟုတ်လော
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင်သင်၏လိင်မှုကိစ္စတွင်ကျဆင်းမှုကိုသင်သတိပြုမိသလော။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးများမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ပိုမိုအားကောင်းသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (“ သေခြင်းသိမ်းဆည်းခြင်း”၊ ပိုမိုမြန်သောလေဖြတ်ခြင်း)၊ မကြာခဏဆီးသွားခြင်း?
အင်တာနက် porn ကိုသုံးပြီးကတည်းကမင်းဟာ“ mojo” ဒါမှမဟုတ်လိင်အယူခံဝင်မှုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီလို့ခံစားရလား။ မင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုသံသယ ၀ င်ပါသလား။
သင့်ရဲ့စကားသံကိုပိုဦးနှောက်အာရုံကြောရေတိမ်ပိုင်း, တင်းကျပ်စွာ, ဒါမှမဟုတ်သဘာဝအမြင့်ဆုံးခံစားရပါသလား? ရေတိမ်ပိုင်းအသက်ရှူ?
သင်ပွန်းစားခြင်း၏အမှတ်များသို့မဟုတ်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုမှ masturbated ပြီလော
သငျသညျ porn မသုံးဘဲအိပ်ပျော်နိုင်ပါသလား? သင်ပိုမိုဒုက္ခညဉ့်မှတဆင့်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေသောရှိပါသလား?
သငျသညျကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော porn flashbacks ရှိပါသလား
သငျသညျ porn ကြည့်ရန်သင်၏အလုပ်, ပညာရေးသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာဒီလောက်စွန့်, သို့မဟုတ်ပါကအပေါ်အလွန်အကျွံပိုက်ဆံဖြုန်းနေပါသလား?
သင်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းသို့မဟုတ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (သို့မဟုတ်ကြောင့်နှင့်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာများ) ကိုကျောင်းကထွက်ခဲ့ပါတယ်ရှိပါသလား?
climaxing ပြီးနောက်သင်ပိုမိုပြင်းထန်သောစိတျအပွောငျးအလဲ (ယားယံခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်) သတိထားမိသလဲ?
Juan: ကျွန်ုပ်အသက် ၂၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုသည်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုအခွံတစ်ခုအဖြစ် (မေတ္တာပါသောနည်းဖြင့်) အကြိမ်များစွာပြောခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်တိုက်ရိုက်မရင်းနှီးသော်လည်းရှင်းပါသည်။ ငါသူနဲ့မရင်းနှီးဘူး။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ မောင်းနှင်မှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ လူတွေဟာငယ်ငယ်ကတည်းကမှအဟောင်းတွေအထိအမျိုးသမီးတွေပတ်ပတ်လည်တွန့်ဆုတ်ခံစားရတယ်
Greg: လိင်တူချင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြန်လည်ပြုမူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ (ငါဖြောင့်ဖြောင့်နေသည်။ ) ဤအကြောင်းအရာသည်အချိန်တိုအတွင်းအဘယ်ကြောင့်ရုတ်တရက်အလွန်စွဲမက်စရာဖြစ်ခဲ့သနည်း။ ငါအရင်ကငါ့ကိုရွံရှာဘွယ်သောပစ္စည်းမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့, ငါ orgasms ပြီးနောက်ငါ့ကိုရွံရှာလိမ့်မည်။
ရိုင်ယန်: ငါ porn ကိုသုံးပါလျှင် binging ကိုကြောက်မိပါတယ်။ ငါ porn ကြည့်နေစဉ်ငါ masturbate လျှင်, ငါသည်နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်တတ်သောငါ၏မကြာသေးမီအတွေ့အကြုံကနေငါသိ၏။
Davy: ငါ porn ဆုတ်ခွာခံစားနေရပြီးခဲ့ခြင်းမရှိအယူအဆရှိခဲ့ပါတယ်။ သစ်တစ်ခုမိန်းကလေးချိန်းတွေ့တဲ့အခါမှာငါ့အထုံးစံရှိသည်အတိုင်းငါရိုးရှင်းစွာ, porn တက်ပေးထားခဲ့သည်။ သည်မှာငါမတိုင်မီစွဲ၏ဤအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ ဤအလက္ခဏာတွေ 90% ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌တွေ့ကြုံဖူးဘူးသောအရာတို့ကိုခဲ့ကြသည်။ သူတို့ထဲကအားလုံး (13 ရက်ပေါင်းမျှ porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / အော်ဂဇင်) များလျော့ကျပြီဖြစ်စေ, ဒါမှမဟုတ်သိသိသာသာဤအချက်အသုံးပြုပုံတိုးတက်နေကြသည်။
စိုးရိမ်စိတ်, ရင်ဘတ်တင်းကျပ်, ထိတ်လန်တိုက်ခိုက်မှုများမြင့်မားနှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအား
သမျှဘာမှကိုနှစ်သက်ယူနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း: အစာစားဖတ်နေ, ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်, ဂီတကစားခြင်းသို့မဟုတ်အနုပညာလက်ရာများကို (ငါဂီတပညာရှင်နှင့်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်၏။ )
ပြင်းထန်အိပ်မပျော်: သုံးပတ်၏သင်တန်းကျော်အိပ်စက်ခြင်း၏အကြောင်းကို 18 နာရီစုစုပေါင်း
နေ့ရက်ကာလ၌ 10 ကြိမ်မှ-up, masturbate တိုးမြှင်တိုက်တွန်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်း, လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှု, အသက်, testicular နှင့်ပေါင်ခြံနာကျင်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွားအရှုံး, ဒါပေမယ့် masturbate မှနေဆဲတစ်ဦးခိုင်တတ်ပြီး (တထုတ်တွက်ဆ)
Adrian: ငါတကယ်ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်အထိငါစွဲကြီးဘယ်လောက်ဆိုးကိုသိဘူး။ ငါသာ porn နှင့်အတူနှိုးဆော်ခြင်းရနိုင်နားလည်သဘောပေါက်။
Tyrone: ငါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်လှုပ်ရှားခံစားခဲ့ရပြီးမိမိကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရသလိုခံစားရတယ်။ ငါကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်။ ငါခံစားရသောအရာကိုမသိရပါဘူး။ အဘယ်အရာကိုမျှငါ့ကိုပျော်ရွှင် / ဝမ်းနည်းစေသည်။
ဘင်: ငါစွဲစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးကွန်ပျူတာအသစ်ရှေ့မှာတစ်နေ့ကိုနာရီပေါင်းများစွာကုန်လွန်နေရတာကိုး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်နှေးကွေးစွာလည်ပတ်နေပြီးကျွန်တော်မကြည့်နိုင်လျှင်ဒေါသနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ပေမယ့်ဗီဒီယိုပြန်စသည်အထိစောင့်ပါ။
လိမ့်မည်: ငါမောပန်းပြီးတဲ့နောက်တစ်ညလုံးသွားပြီးနောက်ထပ်နည်းနည်းထပ်သွားတယ်။ မယုံနိုင်စရာနောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်အရမ်းပင်ပန်းနေသည်။ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်စိနီခြင်းစသောကာယပိုင်းနာမကျန်းဖြစ်ခြင်းများခံစားရသည်။ အလုပ်အပေါ်အာရုံစိုက်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ပြီးငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမေ့သွားတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ပြီးနောက်လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်သည်မြင့်မားသည်။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှမပတ်ပတ်ချင်ဘူး၊ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီးနောက်အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသော်လည်းကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူတက်နေသောကြောင့်အိပ်ပျော်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ငါအဲဒီမှာတစ်ဝက်ပဲရှိတယ်၊ ငါဖြစ်ချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခွံပဲ။ အကြှနျုပျ၏စကားသံကိုပိုမိုမြင့်မားသည်ကို၎င်း, အတန်ငယ်အားနည်းသောအသံ။ ငါမှန်ထဲမှာကြည့်ရတာမကြိုက်ဘူး။ နောက်ဆုံးအချိန်မှာငါနဲ့အတူအနားယူချင်တဲ့မိန်းကလေးစုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမာရသွန်ပြိုင်ပွဲပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၌လိင်စိတ်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ ငါခံစားရအားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Kyle: ငါကလူတိုင်းနဲ့ခွဲနေတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ရလဒ်ကတော့ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပိုလျှံနေလိမ့်မယ်။ LOL အလုပ်မဖြစ်ဘူး အရာကတော့ငါယုံကြည်မှုရှိပြီးလူကြိုက်များခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ED၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများစသည်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အခါကမျှမေးမြန်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။
အင်ဒရူး: အနည်းဆုံးခဏကြာရင်ငါထရပ်နိုင်ဖို့“ ယဉ်ကျေး” တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမြဲတမ်းသွားခဲ့တယ်။ ငါရော်ဘာလည်ပင်းညှစ်နေတဲ့အရူးအမူးစွဲလမ်းမှုထဲကနေငါကြည့်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစွန့်ခွာရတာဟာမထင်မှတ်လောက်ပဲဖြစ်ပုံရတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်နေ့ကျတော့အဲဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးစုံနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ငါမျဉ်းကြောင်းဖြတ်ကျော်မယ်လို့ငါသိသောအခါပါပဲ။ ငါတွန်းလှန်တွေ့ရှိခဲ့တစ်ခုခုမှဆင်းရတဲ့, သမားရိုးကျသဘောအရလိင်နှိုးဆွမဟုတ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကနေငါအလွယ်တကူနှိုးဆွနိုင်ပြီးအော်ဂဇင်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူး။ စစ်မှန်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်နှိုးဆွခြင်းသို့မဟုတ်သုတ်သင်ခြင်းအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသောအခါသင်၌စွဲလမ်းနေကြောင်းသင်သိသည်။ သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်အားသူမအားတိုက်ရိုက်ငါးရှဥ့်တွင်ထည့်ရန်တောင်းဆိုခြင်းနှင့်သင်ကသူမ - `မဟုတ်ပါ 'ဟုပြောသောအခါသင်ကကျွန်ုပ်ကိုချစ်ပါကသင်ကလုပ်လိမ့်မည်။ ဒါငါ့စိတ်ကူးပဲ။ ဒါကမင်းစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာမင်းသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ဦး နှောက်သည်ပလတ်စတစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားစွဲလမ်းမှုကိုအားနည်းစေသည့်အပြင်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုလည်းဖြစ်စေသည်။ သင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုပါကအထောက်အပံ့ရယူပါ။ ပြောင်းလဲမှုလုံးဝဖြစ်နိုင်သည် နောက်ထပ်ကြည့်ရှုပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ Self-အစီရင်ခံစာများ, တင်းမာမှုလျှော့ချ နှင့် ဆုတ်ခွာ ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်။ ယု။ ၏ Self-အစီရင်ခံစာများလည်းတွေ့မြင် နောက်ပြန်ဆုတ်ဆိုးကျိုးများ မိမိတို့ကိုယ်ကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်။
ဒါ့အပြင်ကြည့်ပါ - အကယ်၍ သင်ဟာ PMO စွဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 45 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 25 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 45 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကို? ကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးများဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေလက်စွဲ, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder